Vaovao - The 24 Solar Terms.
Ny 24 Solar Terms dia kilalao biraon'ny ray aman-dreny miaraka amin'ny lohahevitry ny kolontsaina Shinoa nentim-paharazana, izay mety ho an'ny olona mihoatra ny 6 taona.
Maharitra 30mn eo ho eo ny lalao ary mety ho an'ny olona 2-4.
Ankehitriny dia hampahafantatra ny lalao amin'ny antsipiriany amin'ity lalao board ity aho.
Voalohany indrindra, miorina amin'ny bitsika kisary eo amin'ny solaitrabe, mila mametraka ireo ampahany loharano hazo mifanaraka amin'izany eo amin'ny solaitrabe.
dia, ny mpilalao tsirairay dia mifidy loko iray ho marika mpilalao azy manokana ary mametraka izany eo amin'ny toerana fiomanana eo afovoan'ny solaitrabe.
Manaraka, ny mpilalao tsirairay dia mila manao karatra asa ho tanjona amin'ny asany tsirairay amin'ity lalao ity.Ao amin'ny karatra asa tsirairay dia misy asa roa, ary ny mpilalao izay mamita ny asa dia afaka mahazo ny isa ambony amin'ny fotoana hividianana.
Manaraka, mila manokatra kisendrasendra karatra fitaovana fahaiza-manao roa isika.Ireo mpilalao nahavita ny fizaran-taona efatra dia afaka mividy karatra iray isaky ny mandeha.Ny kisary eo amin'ny karatra fitaovana dia ny loharano ilainao handoavana ny fitaovana.
Farany, mila manaisotra ny karatra fiasan'ny vanim-potoana efatra ho an'ny daholobe amin'ny isa ambony ambany.
Manomboka ny lalao, mpilalao voalohany nahita ny kalandrie vao haingana no mpilalao voalohany.
Manaraka izany, anjaran'ny mpilalao voalohany ny manapa-kevitra hoe inona no sakana hametrahan'izy ireo ny famantarana azy.
Isaky ny tonga amin'ny sakana iray ny mpilalao dia afaka misafidy ny haka loharano eo ambonin'ity sakana ity izy ireo.
Misy fitaovana telo misy loharanon-karena, ny voalohany dia ny vongan-drano sy ny tara-masoandro, ny faharoa dia ny oram-panala sy ny voankazo, ary ny fahatelo dia ny felana manerantany.
Ny filaharan'ny fandraisana dia mifototra amin'ny fitaovana.Rehefa nesorina ny loharanon'ny fitaovam-piadiana voalohany, dia azo alaina ny fitaovana faharoa, sy ny sisa.
Ohatra, raha eto amin'ity bloc ity aho dia misy rano mitete sy tara-masoandro amin'ny fitaovana voalohany, dia afaka misafidy aho na haka ny rano rehetra ao amin'io blok io, na ny tara-masoandro rehetra.
Raha tsy misy rano indray mitete na tara-masoandro ao amin'ity sakana ity dia afaka maka ny voankazo na ny lanezy aho.
Raha tsy misy rano mitete na tara-masoandro ao amin'ity sakana ity, na misy ranomandry na voankazo, dia azoko atao ny maka ny felana manerana izao rehetra izao.Ny petal universal dia afaka manolo ny karazana loharano rehetra.
Raha tsy misy loharanon-karena tavela amin'ity sakana ity, dia rehefa tonga amin'ity sakana ity ianao dia tsy afaka mahazo na inona na inona.
Aorian'ny fihetsehan'ny mpilalao intitatial dia afaka manapa-kevitra izay sakana alehany araka ny filaharan'ny famantaranandro ireo mpilalao manaraka.
Marihina eto fa ho an'ny sakana iray dia mpilalao iray ihany no afaka mijanona.
Ohatra, raha mijanona amin'ity sakana ity ny mpilalao iray, dia tsy afaka misafidy ny handeha amin'ity sakana ity aho.
Manaraka, rehefa avy nifindra ho an'ny fihodinana iray ny mpilalao rehetra, dia mila manaraka ny fitsipika manaraka ireto hetsika manaraka ireto:
Isaky ny mandeha aloha ny mpilalao farany eo amin'ny solaitrabe.
Ohatra, izao aho no eo amin'ny farany ary ny olona rehetra eo alohako dia afaka mihetsika aloha aho.
Rehefa avy nihetsika aho, izao, ny mpilalao farany dia ity mpilalao ity, ka amin'ity indray mitoraka ity dia ity mpilalao ity no mihetsika voalohany.
Ao amin'ny lalao dia misy ihany koa ny toe-javatra toy izao:
Ny mpilalao sasany, izay tsy tia miala amin'ny sakana ary te hiampita vanim-potoana iray mba hahazoana karazana loharano.Avy eo izy dia sakana maro alohan'ny mpilalao hafa.
Avy eo, amin'ny manaraka, dia tsy maintsy miandry izy mandra-pahatongan'ireo mpilalao ao aoriany mba hahatratra sy hihoatra azy vao afaka manomboka ny hetsika manaraka.
Ity karazana fandidiana ity dia hanana tombony eo noho eo, saingy tsy hahavery ny fanangonana loharano maro, ary ny tsirairay dia mila manao safidy tsara mifototra amin'ny zava-misy marina amin'ny lalaony.
Rehefa mifindra eo amin'ny solaitrabe, ny mpilalao dia afaka manavotra loharanon-karena ho an'ny karatra fe-potoana masoandro.Tsy misy afa-tsy karatra iray isaky ny vanim-potoanan'ny masoandro, ary iray ihany no azo avotana isaky ny hetsika, tonga aloha ary manompo aloha.
Marihina anefa fa ny fe-potoanan’ny masoandro amin’ny vanim-potoana ipetrahany amin’izao fotoana izao ihany no azon’ny mpilalao manavotra.
Ohatra, nanangona loharano aho ary te-hanavotra ny Lohataona Equinox, saingy ao anatin'ny vanim-potoanan'ny fahavaratra aho izao, noho izany, tsy afaka manavotra azy aho, ary rehefa tonga amin'ny vanim-potoanan'ny lohataona aho dia afaka mividy izany.
Ireo mpilalao izay nahavita ny fizaran-taona efatra dia afaka mahazo anjara amin'ny valisoa avy amin'ny loharano efatra amin'ny tara-masoandro, ny rano mitete, ny voankazo ary ny ranomandry.
Ny mpilalao tonga aloha dia afaka misafidy aloha, ary ny mpilalao tonga any aoriana dia mila misafidy amin'ireo loharano sisa.
Raha ianao no farany tonga dia tsy maintsy maka ny loharanon-karena sisa.Noho izany, ny mpilalao izay mamita ny fihodinana voalohany dia hanana tombony lehibe.
Mandritra izany fotoana izany, rehefa nahavita ny vanim-potoana efatra ny mpilalao dia afaka manomboka mividy ny fitaovana izy ireo.
Ny mpilalao dia afaka misafidy ny iray amin'ireo fitaovana misokatra hividianana, rehefa avy nividy iray, ny faritra fitaovana dia afaka manokatra ny manaraka ho fampisehoana, mba hahafahan'ny mpilalao manaraka misafidy ny hividy.
Ny karatra fitaovan'ny fitaovana dia zavatra azo ariana izay mila apetraka ao amin'ny faritry ny vala rehefa lany.
Eo amin'ny solaitrabe dia misy karazana tetika manokana ihany koa, dia ny sarin-tsary, ny teti-dratsy misy an'io karazana fakan-tsary io.
Rehefa tonga eo amin'ny sarin'ny sary ny mpilalao dia afaka misafidy ny tsy haka ilay loharano izy ireo, fa mampiasa loharano iray haka sary, mba hahazoana ny sary sy ny isa eo aminy mivantana.
Koa rehefa mahatsapa ny mpilalao fa tsy mila ny loharanon-karena dia aoka ho azo antoka fa alaivo ireto tetika azo alaina sary ireto ary mahazo isa fanampiny aloha!
Ao amin'ny lalao, ny Four Seasons Task Card dia napetraka ihany koa, amin'ny teny hafa, rehefa manangona ny iray amin'ireo karatra amin'ny masoandro mandritra ny fizaran-taona efatra ny mpilalao, dia afaka mahazo ny isa amin'ny Four Seasons Task Card izy ireo, napetraka ny isa. hatramin'ny ambony ka hatrany ambany.Ohatra, ny mpilalao izay manangona ny fizaran-taona efatra voalohany dia afaka mahazo isa 8, isa 6 ny faharoa, isa 4 ny laharana fahatelo, isa 2 ny laharana fahefatra.
Mandritra izany fotoana izany dia afaka mahazo valisoa fanampiny ihany koa ny mpilalao izay manangona karatra fe-potoana masoandro be indrindra amin'ny vanim-potoana tokana amin'ny lalao.
Ohatra, raha manavotra karatra fe-potoanan'ny masoandro aho amin'ny vanin-taonan'ny lohataona noho ny mpilalao hafa, dia mahazo isa 4 ho valisoa aho, ary rehefa mahazo isa mitovy amin'ny ankamaroan'ny karatra fe-potoanan'ny masoandro amin'ny mpilalao hafa aho dia afaka mahazo isa 4 izahay.
Famaranana sy famahana ny lalao
Ahoana àry no hamarana ny lalao?
Mila manapa-kevitra mifototra amin'ny isan'ny mpilalao.
Rehefa olona 2 hatramin'ny 3 no milalao ny lalao, rehefa voavotra avokoa ny karatra voambolana masoandro dia tapitra ny lalao.
Rehefa lalaovin'ny mpilalao 4 ny lalao dia tapitra ny lalao rehefa alaina ny karatra fiasan'ny fizaran-taona efatra.
Rehefa tapitra ny lalao, dia miditra amin'ny dingana fametrahana.
Ny lalao dia mampiasa ny mekanika fanangonana isa.
Naoty farany an'ny mpilalao = Ny naotin'ny karatry ny vanim-potoana azon'ny mpilalao + Ny naotin'ny karatry ny asa vita tsirairay + Ny naotin'ny karatry ny asa fizaran-taona efatra + Ny naotin'ny valisoa miaraka amin'ny karatra fe-potoanan'ny masoandro be indrindra ao anatin'ny vanim-potoana tokana + Ny naotin'ny sary
Ny mpilalao manana isa ambony indrindra no mahazo ny fandresena farany.